တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကျမနှင့် ကကြီး-ခကွေး
မနေ့ညနေက ကလေးတွေကို ကွန်ပျူတာသင်တော့ မြန်မာစာ လက်ကွက်ရိုက်နည်း သင်ခန်းစာကို သင်ပါတယ်။
ဘယ်စာလုံးက ဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာကို ကီးဘုတ်ပုံ အကွက်လေးတွေ ရေးဆွဲပြီး တလုံးချင်း ပြောပြနေရင်းနဲ့ “ဌ” ကို ပြောတော့ ကျမက “ဌ” နဲ့ “ဋ္ဌ” မတူကြောင်း ရှင်းပြ ဖြစ်တယ်။ ရှင်းနေတုန်း ကလေးတယောက်က ခုလို ထမေးပါတယ်။
“ဌ၀င်ဘဲ လို့ ဘာလို့ခေါ်ရတာလဲ” တဲ့။ ဒီတော့ ကျမက …
ဌ၀င်ဘဲ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဌ၀မ်းဘဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၀မ်းဘဲ နဲ့ တူတဲ့ ဌ လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် ပြောပြတော့ သူတို့တွေ တယောက်ပြီး တယောက် ဆက်မေးကြပါလေရော။
ထဆင်ထူး ကရော .. ဍ ရင်ကောက်ကရော … ဆိုပြီး မေးလိုက်ကြတာ … တယောက် တပေါက်ပါပဲ။ ကျမလည်း ဒီအကြောင်း ဖတ်ထားတာ မကြာသေးတော့ သူတို့မေးသမျှ ဖြေနိုင်ခဲ့လို့ တော်ပါသေးရဲ့ လို့ ကျိတ်ပြီး သက်ပြင်းချမိတယ်။
ခုခေတ် ကလေးတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူကြီးတချို့လည်း ကကြီး ခကွေး ဘာကြောင့်ခေါ်သလဲ သိပ်မသိကြပါဘူး။ တချို့ဆို ခုနကလေးတွေလိုပါပဲ၊ ကကြီး ခကွေးကို ပီပီသသတောင် မခေါ်တတ်ကြဘူး။
ဋတလင်းဂျိတ်၊ ဌ၀င်ဘဲ၊ ဓအုတ်ချိုက်၊ ဗလက်ချိုက် စသဖြင့် ခေါ်နေကြ ရေးနေကြပါတယ်။
ကျမတို့ စာရေးကြတဲ့ နေရာမှာ ကကြီး ခကွေးတွေနဲ့ စီကုံးရေးသားရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကကြီး ခကွေး အကြောင်းကိုတော့ သိဖို့လိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မြန်မာစာကို သေချာဂဏ သိချင်တဲ့အတွက် ဟိုးတလောက ကျမ မြန်မာစာ သင်ပုန်းကြီးစာအုပ် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း သူငယ်တန်း ဖတ်စာထဲက စာသားလေးတွေ ကျမ လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီစာသားလေးတွေကို အပြင်လောက နဲ့ စပ်ဟပ်ပြီး တွေးကြည့်ရတာ သဘောကျမိတာနဲ့ “ညအခါ-လသာသာ” တို့ “ရာသီဥတုပူသည်” တို့ ကျမ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမရဲ့ ဘလော့ နာမည်ကိုက “တွေးမိတွေးရာ ရေးမိရေးရာ” ဆိုတော့လည်း ကျမတွေးမိသမျှတွေ လျှောက်ရေးနေမိတာပါ။ ကျမ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေတော့ မတွေးတတ်ပါဘူး။ ကျမရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျမလေ့လာထားတဲ့ ပညာရပ်အချို့နဲ့ ကျမခံစားမိတဲ့ ခံစားချက်တွေ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တွေးမိခြင်းကို ရေးမိခြင်းမျှပါပဲ။
ကြုံလို့ ပြောရမယ်ဆိုရင် …. ကျမရဲ့ ဖခင်ကြီးဟာ ဘာသာရေး သင်တန်းနည်းပြ ဆရာဖြစ်သလို ဘာသာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာပေတွေ ရေးသားထုတ်ဝေသူ တဦးဖြစ်တာမို့ ကျမဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့စာတွေ, စကားတွေနဲ့သာ ထိတွေ့နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျမရဲ့ အတွေးအခေါ် အရေးအသားတွေဟာ ဘာသာရေးနဲ့ မကင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျမအနေနဲ့ ရှက်စရာမဟုတ်သလို၊ တပါးသူအနေနဲ့လည်း လှောင်ပြောင်စရာလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ကျမကတော့ မြင်မိပါတယ်။
အခု ကျမ ကကြီး ခကွေး အကြောင်း ရေးချင်ပါတယ်။ ကကြီး ခကွေး ဘာကြောင့်ခေါ်သလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ကျမ လေ့လာမိသလောက် ပြန်လည် ဝေမျှချင်တဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါလေးများ လာရေးနေရသေးတယ်လို့ အထင်သေးလိုက သေးနိုင်ပါတယ်။ မသိသေးသူများနဲ့ သိလိုသူများကိုသာ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က တတ်သိ ပညာရှင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို မရည်ရွယ်ပါဘူးရှင်။
ကကြီး - ဗျည်း ၃၃-လုံးတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်သဖွယ် အဦးအစမှာ ရှိခြင်းကြောင့် “ကြီး” ဆိုတဲ့ ၀ိသေသနနဲ့ “ကကြီး” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ခကွေး - (ပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့်)ကွေးသော ခ
ဂငယ်၊ ဃကြီး - ငယ်သော ဂ၊ - ကြီးသော ဃ
* င၊ ဉ၊ မ၊ ၀၊ သ၊ ဟ တို့မှာ ၀ိသေသနမတွဲရပါ၊ ပကတိအသံသာ ထွက်ကြပါတယ်။*
စလုံး၊ ဆလိမ် - လုံးသော စ၊ အလိမ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော စ
ဇကွဲ၊ ဈမျဉ်းဆွဲ - ကွဲသော စ၊ မျဉ်းဆွဲလျက်ရှိသော စ
(စလုံး၊ ဆလိမ်၊ ဇကွဲ၊ ဈမျဉ်းဆွဲ ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေမှာ လုံး၊ လိမ်၊ ကွဲ၊ မျဉ်းဆွဲ စတဲ့ ၀ိသေသနတို့ရဲ့ မှီရာက ‘စ’ ပင် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်)
ဋသံလျင်းချိတ် (ဋခြေဆင်း) - သံလျင်းချိတ်နှင့် တူသော ဋ၊ ခြေဆင်းလျက်ရှိသော ဋ
(သံလျင်းချိတ် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကတော့ ….ရှေးတုန်းက မင်းစိုးရာဇာတွေ စီးတဲ့ လူထမ်းရတဲ့ယာဉ်ကို “သံလျင်း” လို့ ခေါ်ပါတယ်၊ အဲဒီသံလျင်းမှာ ချိတ်တဲ့ ချိတ်နဲ့တူလို့ ဋသံလျင်းချိတ်လို့ ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်)
ဌ၀မ်းဘဲ - ၀မ်းဘဲသတ္တ၀ါနဲ့ တူသော ဌ
ဍသံကောက် (ဍရင်ကောက်) - သံကောက် (ကောက်နေသော သံချောင်း) နှင့် တူသော ဍ၊ ရင်ဘတ်သဖွယ် ကောက်နေသော ဍ
ဎရေမှုတ် -ရေမှုတ်နှင့်တူသော ဎ
ဏကြီး - ကြီးသော ဏ
တ၀မ်းပူ - ပူသောဝမ်းရှိသည့် တ
ထဆင်ထူး - ဆင်ကိုခတ်သော ထူးနှင့် တူသည့် ထ
ဒထွေး - ငယ်သော ဒ (ထွေး = ငယ်သည်)
ဓအောက်ခြိုက် -အောက်ဖက်၌ ခြိုက်ဝှမ်းဖြစ်နေသော ဓ
(မူလ ဓအက္ခရာဟာ ဗ ပြောင်းပြန်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပါတယ် အောက်က အပိတ်မပါပါဘူး။)
နငယ် - ငယ်သောန
ပစောက် - အစောက်ရှိသော ပ
ဖဦးထုပ် - ဦးထုပ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော ဖ
ဗထက်ခြိုက် - အထက်က ခြိုက်ဝှမ်းဖြစ်နေသော ဗ (ဗနှင့် ဓ အထက်ခြိုက်နှင့် အောက်ခြိုက် ကွာခြားသည်)
ဘကုန်း - ကုန်းသောပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော ဘ
ယပက်လက် - ပက်လက်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော ယ
ရကောက် -ကောက်သောပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော ရ
လ (ငယ်)၊ ဠ ကြီး - ငယ်သော လ၊ ကြီးသောဠ
ကကြီး ခကွေး စစ်တမ်းကတော့ ဒီမျှပါပဲ။
မြန်မာတိုင်း မြန်မာစာပေကို ချစ်တတ် မြတ်နိုးတတ် လေးစားတတ်စေရန် ရည်သန်၍ …
(ရည်ညွှန်း - ဟံသာဝတီ ဦးဘရင် ၏ မြန်မာစာ အခြေပြ - ၁၉၆၇၊ ဒီဇင်ဘာလ)
မမေရေ… မမေရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်ရင် အသိပညာ တခုခုကတော့ ရစမြဲပဲ။ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။ (စကားမစပ်… “ပြန်စာ” မှာ ကျွန်တော်မေးထားတာတွေ အပြင် သက်ဆိုင်တဲ့ မှားတတ်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေရော ဖြေထားပေးတာ အတိုင်းထက် အလွန်ပါပဲဗျာ။)
“ဒါလေးများ ရေးနေရသေးတယ်” လို့ ကျွန်တော်ကတော့ မထင်နိုင်ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခု မမေရေးမှ သေချာသိဖူးလို့ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ရှက်မိပါရဲ့။ ဒီလောက် အခြေခံကျပြီး အရေးကြီးတာကို မသိရကောင်းလားလို့။
ဒါနဲ့ ဎရေမှုတ်က Tilde + 1 ပါ မမေရေ။
၀ိသေသနမတွဲရတာ ညကြီး မဟုတ်ဘူးလား။
ဉ ကလေးကို ၀ိသေသနတွဲပြီး ဉ ကလေးလို့ဖတ်ကြပါတယ်။
ညကြီးကိုတော့ ၀ိသေသနမတွဲဘဲ ညလို့ပဲဖတ်ကြပါတယ်။
I thank you so much for your knowledgeable post. I ashamed of myself as I did not look for the very basic of our language even I am much older than your students are.
Please carry on and I am looking forward to see your posts like this in future as well.
5/03/2007 6:42 AM
-ကျေးဇူးပါ ကိုပုထုဇဉ် . ဎရေမှုတ်ကို ပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ။
- ဟုတ်ပါရဲ့ lay …
ကျမလည်း ကိုးကားစာအုပ်ထဲကအတိုင်း ရိုက်ထားတော့ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ညကြီးဆိုတာ ပါဠိမှာဆိုရင် ဉ+ဉ နှစ်လုံးဆင့်ထားတဲ့ ပါဌ်ဆင့်မို့ ပါဠိမှာဆိုရင်တော့ ဉကလေး ညကြီးလို့ မခေါ်ဘူး ထင်တာပါပဲ။ မြန်မာမှာတော့ ဉကလေး နဲ့ ညကြီး ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက် ဉကလေးကို ၀ိသေသနထည့် သင့်တာပေါ့နော်။ ထောက်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
- ko tian ကွန်မန့်အတွက် ကျမကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
5/03/2007 7:06 AM
အိန္ဒိယရဲ့ ရှေးအကျဆုံး ဗြဟ္မဏီဘာသာစကားက မြန်မာဘာသာစကား အပေါ် သက်ရောက် ဆက်နွယ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဗြဟ္မဏီမှာလဲ က..ခ စတဲ့ အက္ခရာတွေ ရှိနေတယ်။ ဒီအက္ခရာတွေကို မြန်မာတွေ အသုံးပြုပုံဟာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ကကြီး ခကွေး စတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေဟာ မြန်မာမှုစစ်စစ်လို့ မှတ်ယူမိပါတယ်။
burma today proudly want to post your articles in our pages.
when i come home in 2003 i met my niece and asked this question " What grade are you in now tha mee". "Grade three", uncle was her answer. Then i asked "can you recite 33 Myanmar Alphabets to me Tha Mee". Uncle, "i am now in grade three" she gave me the same answer. "yes i know Tha Mee, so please tell me 33 Myanmar Alphabets now ok" i asked. Then again she gave me the same answer as following, "uncle, i am now in grade three, so i forgot 33 Myanmar alphabets. That is real story of my family. Having read Ma May's post, this story come into my heart again and worry for our new generation's education.
5/03/2007 8:21 AM
ခုလို ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုနတ္ထိ။
ကျမ ခွင့်ပြုပါတယ် burma today ရှင့်။
ဘယ်မှာတင်မယ်ဆိုတဲ့ လင့်ခ်လေး တော့ သိချင်ပါတယ်ရှင်။
ကိုမောင်ကြီးလိုမျိုး ကျမလဲ ကြုံဖူးပါတယ်။ ၃ တန်းကလေးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဘွဲ့ရပြီးသား တွေရှင့်။
ကျနော်ထိုင်းမှာ နေစဉ်က ထိုင်းစာသင်ပုန်းကြီးကို လေ့လာတော့ အစအက္ခရာက ကောကိုင်၊ခေါခိုင် စသဖြင့် လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆောစာလ၊ လောလင်း စသဖြင့် အက္ခရာတွေကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ မြန်မာ ဗျည်းတွေ သရတွေနဲ့ သဘောတရားတွေတူနေတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာစာကို အခြေခံကျကျ လေ့လာထားတဲ့ မမေတို့လိုသူတွေ ထိုင်းစာကို လေ့လာရင်လည်း လွယ်ကူတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မမေ.. ဒီပို့စ်လေးက ဗဟုသုတတွေရစေတယ် ။ မမေလို ကကြီး ခခွေးကို ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့သူရှိလို့သာ ကျွန်မတို့တွက် ခုလို ဗဟုသုတရရတာ ။
ဒါနဲ့ ကျွန်မဒီနေ့ အလုပ်လာတုန်း လမ်းမှာ နေပူ မိုးရွာတော့.. ငယ်၂က ဆိုဖူးတာလေး သတိရမိတယ် ။
နေပူ မိုးရွာ သူခိုးလာ ၊ လာတဲ့ သူခိုး လှံနဲ့ထိုး ၊ သူခိုး အီးပေါက် ငါမကြောက် ၊ ဆေးတံကြီးနဲ့ ခေါက်.. ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက်.. ။
အဲဒီဟာလည်း ဘယ်လို ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ မမေသိလားဟင် ။ ဒါမှမဟုတ် ကလေးတွေ သူ့ ဘာသာ တီထွင်ကြတာလားး)
5/04/2007 2:38 AM
ဆရာ မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ) ရဲ့ ‘‘မြန်မာစကား မြန်မာစာ ရုပ်ပုံလွှာ’’
စာအုပ်ကို လေ့လာကြည့်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
ကိုမိုးထက် ညွှန်းတာနဲ့ ForeverSpace.com မှာ မောင်ခင်မင်ရဲ့စာအုပ်တွေကို ရှာကြည့်တော့ ‘‘မြန်မာစကား မြန်မာစာ ရုပ်ပုံလွှာ’’ ကို မတွေ့ဘူးဗျ။ ဖတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာရနိုင်သလဲဆိုတာ ညွှန်းပါလားဗျာ။
5/04/2007 8:06 PM
သဘောကျသွားပြီ မမေဒါဝီရေ. ကျေးဇူးပါဘဲ
တာ( ခ ဂ င ပ ၀ ဒ )ခြောက်လုံးဘဲ့ရှိတယ်။
5/10/2010 5:56 AM